KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): မြန်မာစစ်တပ် စစ်ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ကေအန်ယူကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
မြန်မာစစ်တပ် စစ်ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ကေအန်ယူကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
ကောင်းဝါ သတင်းဌာန မှ....
မြန်မာစစ်အစိုးရသည် အရပ်သားအစိုးရအဖြစ် ပြောင်းလဲသော်လည်းတိုင်းရင်းသားလူထုများအပေါ် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် စစ်အာဏာကြီးစိုးမှုကပြောင်း လဲခြင်းမရှိသည့်အပြင်နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုနှင့် စစ် ရာဇ၀တ်မှုများကို ဆက်လက် ကျူးလွန်နေ ကြောင်း ကေအန်ယူခေါ်ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးမှ မေလ (၂၆) ရက်နေ့ စွဲဖြင့် ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကေအန်ယူ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ (၅) ခုအတွင်းရှိလှုပ်ရှားနေသည့် မြန်မာ စစ်တပ်များက လေးလတာ ကာလအတွင်း ကရင်ပြည်သူ ၂ ထောင်ကျော်အား အကာအကွယ်အဖြစ်အသုံး ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှစ၍ ဧပြီလကုန်ထိ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရ သည့် ရွာသားပေါင်း (၂၀၅၁) ဦးထဲတွင် အမျိုး သမီး (၁၂၂၀)ဦးလည်းပါဝင်သည်။ထိုရွာသူရွာသားများ သည် စစ်တပ်အတွက် အကာအကွယ်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ မိုင်းရှင်းပေးရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုခံရသည်ဟု ကြေညာချက်ထဲတွင်ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးစီး၍ အစိုးရသစ်တစ်ရပ်ပေါ်ထွက်လာသည်ဆိုသော်လည်း တိုင်းရင်းသားဒေသတွင် ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ ယခင်အတိုင်းလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရဆဲဟု ကေအန်ယူခေါ် ကရင်အမျိုးသားအစည်း အရုံးအတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်မှူးစောလှငွေကယခုလိုပြောပါသည်။
“သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်တို့အဖွဲ့တွေကတော့ အစိုးရသစ်ပေါ်လစီသစ်တွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ပြောင်းလဲမယ်ဆို ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအရရော တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးမှုအရရော ငြိမ်းချမ်းရေးအရရော အဲဒါသူတို့ က တကယ့်ကိုပဲကြားကောင်း အောင်ပြောနေပါတယ်။ လုပ်မယ်ဆိုတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပ တော်တော်များများ ကနေပြီးတော့ သူတို့ ကိုမျှော်လင့်ကြတာပေါ့၊ တကယ်တမ်းပြောင်းလဲလာမလားဆိုပြီး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ရဲ့ကနေ့ လက်ရှိကရင်အမျိုးသားတွေရဲ့ စစ်မြေပြင်တွေမှာတော့ ဘာမှ အပြောင်းအလဲမရှိသေးဘူး၊ပေါ်တာ ဆွဲမြဲဆွဲ။ လူတွေကိုခိုင်းမြဲခိုင်း။ သတ်မြဲသတ်။ လုမြဲလု။ ရှို့ မြဲရှို့ ဆိုတော့ အဲဒီထဲမှာ လည်းပဲအမျိုးသမီး တွေကလည်း ဆက်လက်အကြမ်းဖက်ခံနေရတယ်၊ ကလေးတွေ ကိုလည်းချမ်းသာမပေးပဲနဲ့ တစ်ပြည် နှစ်ပြည်ကစ နို့ဆီဗူးသုံးလေးငါးလုံးလောက်အစ ထမ်းခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ ဒီအဖြစ် အပျက်တွေကို ကြည့်ပါအုံးဗျာ နိုင်ငံတကာကြီးရယ်။
ယခုလို ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် ကေအန်ယူအနေနှင့်ကရင်တိုင်းရင်းသားတစ်ခုတည်းအတွက် ထုတ်ပြန်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ပြည်သူများခံစားနေရသောအဖြစ်အပျက်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံရမှု များကို ကမ္ဘာမှသိရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ထုတ်ပြန်ရသည်ဟု ဗိုလ်မှူးစောလှငွေ ကပြောသည်၊
အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များကို စစ်တပ်အကာအကွယ်အဖြစ် အသုံးခံနေရသောကြောင့် နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုနှင့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုများကိုပါ ကျူးလွန်နေသောကြောင့် ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံ များနှင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများကိုပါ မြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များဧ၊် လူမဆန်သောလုပ်ရပ်များကို ရပ်တန့် ရန် ပြင်းထန်သောအရေးယူမှုများပြုလုပ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မြန်မာပြည်အတွက် အမြန်ဆုံး စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် တစ်ရပ်ဖွဲ့ စည်းပေးပါရန်ုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေနှင့် အလေးအနက်တောင်းဆိုထား ကြောင်း ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်၊။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးသည် ၁၉၄၉ခုနှစ်မှစ၍ အာဏာရမြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်ကိုတော်လှန်နေ သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:56 AM
▼ 05/29 - 06/05 (47)
Summary of Preliminary Guidelines & Process for Mi...
WAR:Shan State Army’s strategic base in Tangyan to...
Burma’s Myo Yan Naung Thein on Dare to Die for the...
SSA နဲ့ အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ...
US senator visits to South Dagon HIV+ care house
မြိုင်ကြီးငူရှိ BGF နှင့် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မျာ...
ကျွန်တော်၏ညီအစ်ကို DKBA ထံသို့ (၄)
၈ ကြိမ်မြောက် ကရင်ယူနတီ စီမီနာ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း
Karen_Unity_Seminar_8th- Statement June 1, 2011
ပိုက်ဆံပေးပြီး အခေါင်းထဲ ဝင်အိပ်ကြသူများ
ဂျွန်မက်ကိန်းရဲ့ နေပြည်တော်ခရီးစဉ် အထက်လွှတ်တော်အမ...
Burmese troops deploy to KIA Battalion 9-video Kac...
ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထဲသို့ ယခင်နယ်ခြားစောင့်တပ် နယက ဗိ...
၂၀၁၁ခုနှစ် ပဒိုမန်းရှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုကို နမ့်ဘွ...
Thumbnail14:42 DVB - 29.05.2011 - Weekly Burma New...
DVB - 30.05.2011 - Daily Burma News
မြန်မာငွေဈေး ပြန်မာလာ အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ဆန္ဒပြခွ...
ရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံ (၈,၀၀၀) ကျော် အိုးအိမ...
Statement KUS(Karen National Unity Seminar) May 20...
ဘယ်နေရာဘယ်အခြေနေဘဲရောက် ဘာတွေဘဲလုပ်လုပ် ကရင်မျိုးခ...
ORDERED OUT:The costs of building Burma’s Upper Pa...
ကရင်နီလူငယ် ညီလာခံ ကျင်းပပြီး
Burma:Villagers Flee Fighting in Mae Thasa Village...
ဘန်ကောက်ကနေ ဆရာတော်ပြန်လည်ရောက်ရှိ၊ ဗမာစစ်တပ်တက်လာ...
နယ်ခြားစောင့်လက်ခံတဲ့ DKBAဌာနချုပ် သိမ်းပိုက်ခံရ
သန်းရွှေတို့သိန်းစိန်တို့ဒီလို မုဒိန်းကျင့် လူသ...
အွန်လိုင်းပေါ်၌ ခင်မင်သူက သွေးဆောင်ဖျားယောင်း၍ အလို...
သစ်ခြောက်ပင် စခန်းကို ဒီအေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ တိုက်ခိုက်
မြန်မာစစ်တပ် စစ်ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ကေအန်ယြူေ...
နယ်ခြားစောင့်(DKBA)တပ်တွင်း ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုများ ဖြ...
စောဘဦးကြီး မူ ၄ ချက်ကို ကားပါမစ်နှင့် လဲစားသူများ...
ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားနှင့် ကျွန်ုပ်၏ အတွေးစများ
တတိယ အကြိမ်မြောက် ပဒိုမန်းရှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုေ...
မြိုင်ကြီးငူ ဒေသရှိ BGF တပ်ဖွဲ့များ DKBA တံဆိပ် ပြ...
Drug threats in Kachin